Aragtiwanaagsan.com – Dhismahan aad iyo aadka u weyni waa suuq-yare ku yaalla dalka china waxana la dhisay 2009 kii,waxa la aaminsanyahay in ay jimam galaan,dabadeed cid badan oo ka tukaameysataa ma jirto,waa iska madhanyahay markasta !! wariye ayaa ka soo diyaariye warbixin!
Dhismahan aad iyo aadka u weyni waa suuq-yare ku yaalla dalka china waxana la dhisay 2009 kii,waxa la aaminsanyahay in ay jimam galaan,dabadeed cid badan oo ka tukaameysataa ma jirto,waa iska madhanyahay markasta !! wariye ayaa ka soo diyaariye warbixin!
Jan 21, 2016 cabdicasiis mohamed Uncategorized 0
Barnaamij Gaara Oo Ku Saabsan Dugsiga Tababarka Booliska Ee Madheera. /TVga Qaranka/ka daawo aragtiwanaagsan.com Qiso cajiib ah,Laba carruur ah oo mataano ah,oo soo dhashay iga oo gacmaha ishaysta,waxayna ku dhasheen muddo 28 todobaad ah,miisaankooduna waa 1kg,waxayna ku dhasheen dalka ustareeliya,aabahaad ayaan laabta ku haya,waxa daawaday fiidyowgana laga duubay 8 milyan oo qof!!ka daawo aragtiwanaagsan.com
QISO DHAB AH, SHEEKO XARIIR, LIBAAX,...
gabadh uu qabo nin qabab qablay weyn oo...
Cirmaaxe ku maqnaa hawada sare oo si...